नेता किम जोङ उन किन रेलबाट मात्रै यात्रा गर्छन् ? कारण यस्ता छन् - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
नेता किम जोङ उन किन रेलबाट मात्रै यात्रा गर्छन् ? कारण यस्ता छन्
30 March, 2018 12:05 pm
थुप्रै आशंका र अनुमानपछि अन्ततः उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन चीन आएको आधिकारिक पुष्टि भयो । चीन र उत्तर कोरिया दुवैले यसको आधिकारिक पुष्टि गरेका छन् । सन् २०११ पछि किम जोङ उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण भएको बताइएको छ ।
आधिकारिक पुष्टि हुनुभन्दा पहिले नै एउटा रेलको हरियो डिब्बामा यात्रा गर्दै किम जोङ उन चीन भ्रमणमा आएको अड्कलबाजी गरिएको थियो ।
अहिले प्रायः विश्वका सबै ठूला नेता समय बचाउनका लागि हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरमा यात्रा गर्दछन् । आफूलाई आधुनिकीकरणतर्फ बढाइरहेको बताउने उत्तर कोरियाका नेता भने रेलमै यात्रा गर्दछन् ।
हवाई यात्राबाट किन डराउँछन् ?
किम साँच्चै डराउँछन् त ?
उत्तर कोरियाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत सपराका अनुसार किम जोङ उनका हजुरबुवा केवल एक पटक हवाईजहाजमा इन्डोनेसिया गएका थिए । सपरा भन्छन्, ‘पूरै देश अलर्टमा रहन्छ । उत्तर कोरियाको कसैसँग पनि शान्ति सम्झौता छैन । यस्तोमा उनीहरु आफ्नो सुरक्षालाई लिएर डराउँछन् नै ।’